DOWNLOAD Northrop B-2A Mmụọ AlphaSim FS2004 - Rikoooo
Northrop B-2A Mmụọ AlphaSim FS2004
downloads 10 758
n'ihi na FSX/P3D version pịa ebe a
Litle Iju nke àgwà ex payware ma ugbu a, n'ihi na free! The mebere B-52 nwere a kwalite asụsụ ọma na kokpiiti na omenala ụda. Ezigbo checklist na e dere n'Akwụkwọ Nsọ! Gụọ ihe ndị na Readme.txt
The Northrop Grumman B-2 Spirit (a makwaara dị ka Stealth otu bombu) bụ American ụzọ otu bombu, featuring ala ịhụ anya stealth technology mere maka penetrating oké emegide ugbo elu chebe onwe; ọ bụ ike idokwa ma ot na ngwá agha nuklia. The otu bombu nwere a-akwọ ụgbọ nke abụọ na nwere ike idebe ruo iri asatọ 500 lb (230 n'arọ) -class JDAM GPS-eduzi bombs, ma ọ bụ iri na isi 2,400 lb (1,100 n'arọ) B83 bọmbụ nuklia. The B-2 bụ naanị ụgbọ elu na ike na-ebu nnukwu ikuku na-elu standoff agha-a stealth nhazi.
Development na mbụ malitere n'okpuru "Advanced Technology otu bombu" (atb) oru ngo n'oge Carter ochichi, na ya ịrụ ọrụ bụ otu n'ime ihe ndị mere maka ya kagbuo nke B-1 Lancer. Atb aka iso n'oge Reagan ochichi, ma nchegbu banyere igbu oge Okwu mmalite nke mere ka a nabata nke B-1 omume dị ka nke ọma. Mmemme akwụ ụgwọ bilie nile development. Haziri ma arụpụtara site Northrop Grumman na enyemaka site Boeing, na-eri nke ọ bụla ụgbọelu kwa, nkezi US $ 737 nde (na 1997 dollar). Total ị nweta akwụ ụgwọ kwa, nkezi $ 929 nde kwa ugbo elu, nke na-agụnye akụkụ ahụ mapụtara, ngwaọrụ, retrofitting, na software support. Mkpokọta omume na-eri gụnyere mmepe, injinịa na ule, kwa, nkezi $ 2.1 ijeri kwa ụgbọ elu ke 1997.
N'ihi na nke bukwanu isi obodo na arụmọrụ-akwụ ụgwọ, ngo bụ controversial na US Congress na n'etiti Joint Chiefs nke ọrụ. The asọfe-ala nke Agha Nzuzo na akụkụ ikpeazụ nke 1980s n'ụzọ dị ịrịba ama belata mkpa ọ dị ka ụgbọ elu, nke e hiwere n'ebumnobi nke penetrating Soviet airspace na-awakpo elu-uru zaa. N'oge oge 1980s na 1990s, Congress dalata mbụ atụmatụ ịzụta 132 atụ bọmbụ ka 21. Na 2008, a B-2 e bibiri na a okuku esisịt ini ke takeoff, na ndi oru ugbo ejected n'enweghị nsogbu. A ngụkọta nke 20 B-2s-anọgide na ọrụ na United States Air Force.
Ọ bụ ezie na na mbụ ndị e mere n'ụzọ bụ isi dị a nuclear otu bombu, ndị B-2 mbụ e ji mee ihe na ọgụ iji dobe ot bombs on Serbia n'oge Kosovo War na 1998, hu aka iso eji n'oge na agha na Iraq na Afghanistan. B-2s na-eji n'oge 2011 Libyan agha obodo. (Wikipedia)
Onye edemede: Alphasim / Virtavia
Nịịka SD3-30 FS2004
Ilyushin Il-86 ngwugwu FS2004
British Aircraft Corporation BAC 1-11 FS2004